Knowledge Archives - ပညာ ပါဝါ
ဗလာဒီမာ ပူတင်၏ အမှား သုံးရပ်
Too Far | 01/03/2022
ဗလာဒီမာ ပူတင်၏ အမှား သုံးရပ် ရုရှားတို့ ယူကရိန်းအား ကျုးကျော် ခဲ့မှုသည် စီစဉ်ထားသည့် အတိုင်း ဖြစ်မလာခဲ့ပေ၊ ယူကရိန်း၏ ဒုတိယ အကြီးဆုံး မြို့တော် ဖြစ်သော ကာကစ်ဗ်အား ရုရှားတို့ တိုက်ခိုက်လာမှု ကို ယူကရိန်းတို့ တွန်းလှန်နိုင်ခဲ့ပုံ ရသည်။ တောင်ပိုင်းတွင် ဗလာဒီမာ ပူတင်၏ တပ်များက နယ်မြေများကို
ပင်လယ်နက်အရေးအခင်း သို့မဟုတ် Super Power အလှည့်အပြောင်းဖြစ်လာနိုင်သည့် ယူကရိန်းအရေး
Too Far | 23/02/2022
ပင်လယ်နက်အရေးအခင်း သို့မဟုတ် Super Power အလှည့်အပြောင်းဖြစ်လာနိုင်သည့် ယူကရိန်းအရေး NATOအဖွဲ့နောက်ခံပြုထားသည့် ယူကရိန်းနှင့် ရုရှားနိုင်ငံအကြား နိုင်ငံရေး တင်းမာမှုသည့် တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ အရှိန်မြင့်တက်လာခဲ့ပြီး ပဋိပက္ခအသွင်သို့ ရောက်ရှိရန်နီးစပ်လာခဲ့သည်။ ယခုအချိန်တွင် ယူကရိန်း၏ တစ်ခုတည်းသော ပင်လယ်ထွက်ပေါက်ဖြစ်သည့် ပင်လယ်နက်သည် ရာစုနှစ်တစ်ခုအတွင်း မဖြစ်ဖူးခဲ့သည့် စစ်ရေးအရှိန်အဆင့်ထိ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ သို့သော် ပင်လယ်နက်ဒေသတွင် ဖြစ်ပေါ် လာသည့်
ရုရှား – ယူကရိန်း နယ်စပ်မှာ တင်းမာမှု မြင့်တက်နေချိန် ပူတင် ရဲ့ လုပ်ရပ်က ဉာဏ်ကြီးရှင် တစ်ယောက်လိုပဲ လို့ ဒေါ်နယ်ထရန့် ချီးကျူး
ရုရှား – ယူကရိန်း နယ်စပ်မှာ တင်းမာမှု မြင့်တက်နေချိန် ပူတင် ရဲ့ လုပ်ရပ်က ဉာဏ်ကြီးရှင် တစ်ယောက်လိုပဲ လို့ ဒေါ်နယ်ထရန့် ချီးကျူး ခွဲထွက်ဒေသ နှစ်ခု ဟာ လွတ်လပ်တဲ့ ဒေသတွေ ဖြစ်ကြောင်း ကရင်မလင် နန်းတော် ကအသိအမှတ်ပြု လိုက် ပြီး နောက် ယူကရိန်း မှာ
တရုတ် ၊ရုရှားနဲ့ ဆားဘီးယားတို့ စစ်ကောင်စီကို လက်နက်ထောက်ပံ့နေ..
တရုတ် ၊ရုရှားနဲ့ ဆားဘီးယားတို့ စစ်ကောင်စီကို လက်နက်ထောက်ပံ့နေ.. တရုတ် ၊ရုရှားနဲ့ ဆားဘီးယားနိုင်ငံတွေဟာ စစ်ကောင်စီကို စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေ ဆက်လက်ထောက်ပံ့နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ တွန်အန်ဒရူးက ပြောလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီသုံးနိုင်ငံဟာ စစ်တပ်ကို လက်နက်ရောင်းချရာမှာ တိုက်လေယာဉ်တွေ ၊ သံချပ်ကာယာဉ်တွေ ၊ အမြှောက်တွေနဲ့ ရော့ကတ်လောင်ချာတွေ ပါဝင်တယ်လို့ တွန်အန်ဒရူးက
“တော်လှန်ရေးသမားမှန်ရင် အဆင်ပြေမနေဘူး။ အဆင်ပြေနေတဲ့လူဆိုရင် တော်လှန်ရေးသမားမဟုတ်ဘူး” – ခိုင်မြဲဟုခေါ်သည်
“တော်လှန်ရေးသမားမှန်ရင် အဆင်ပြေမနေဘူး။ အဆင်ပြေနေတဲ့လူဆိုရင် တော်လှန်ရေးသမားမဟုတ်ဘူး” – ခိုင်မြဲဟုခေါ်သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက် ၊ ည ၁ နာရီခွဲခန့်အချိန်တွင် ဦးအောင်နိုင်ထွန်း၏ လက်ကိုင်ဖုန်းအသံမှာ ကျယ်လောင်စွာဖြင့် ထမြည်လာသည်။ ဦးအောင်နိုင်ထွန်းဆိုသည်မှာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သန်လျင်မြို့နယ်၏ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ အိမ်အောက်ထပ်ရှိ ဖုန်းမြည်သံကြောင့် အပေါ်ထပ်တွင် အိပ်စက်နေသည့်
ပြည်တွင်းဖြစ် မြန်မာ့ တိုင်းရင်းဆေးကို သုံးပြီး ကိုဗစ် – ၁၉ ကာကွယ်ကုသနိုင်ဖို့ တိုးတက်လာပြီလို့မအလ ထုတ်ပြော
Too Far | 22/02/2022
ပြည်တွင်းဖြစ် မြန်မာ့ တိုင်းရင်းဆေးကို သုံးပြီး ကိုဗစ် – ၁၉ ကာကွယ်ကုသနိုင်ဖို့ တိုးတက်လာပြီလို့မအလ ထုတ်ပြော မြန်မာတိုင်းရင်းဆေးကို အသုံးပြုပြီး ကိုဗစ်-၁၉ရောဂါ ကာကွယ်ကုသနိုင်ဖို့အတွက် တိုးတက်မှုတွေရှိနေပြီလို့ စစ်ကောင်စီဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က “အကြိမ် (၅၀)မြောက် ရွှေရတုအထိမ်းအမှတ် မြန်မာနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာသုတေသန ညီလာခံ”ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ ပေးပို့ပြောကြားတဲ့ အမှာစကားမှာ ယခုလို ပြောကြားထားတာ
ယူကရိနျးမူကွိုကြောငျးကို ရုရှားထောကျခံအားပေးတဲ့ ခှဲထှကျသူပုနျတှကေ လကျနကျကွီးနဲ့ ပဈခတျ ( ဗလ ရော ဇ ရော ရှိတဲ့ ပူတငျ ဟာ တဖကျလှညျ့နဲ့စဈပှဲကို စလိုကျပွီလား…)
Too Far | 18/02/2022
ယူကရိနျးမူကွိုကြောငျးကို ရုရှားထောကျခံအားပေးတဲ့ ခှဲထှကျသူပုနျတှကေ လကျနကျကွီးနဲ့ ပဈခတျ ( ဗလ ရော ဇ ရော ရှိတဲ့ ပူတငျ ဟာ တဖကျလှညျ့နဲ့စဈပှဲကို စလိုကျပွီလား…) ယူကရိနျးမူကွိုကြောငျးကို ရုရှားထောကျခံအားပေးတဲ့ ခှဲထှကျသူပုနျတှကေ လကျနကျကွီးနဲ့ ပဈခတျ ရုရှားက ထောကျပံကူညီပေးထားတဲ့ ခှဲထှကျလကျနကျကိုငျအဖှဲ့က ယူကရိနျးရုရှား နယျစပျ Donbas ပွညျနယျထဲက မူကွိုကြောငျးကို
၁၉၃၇ ခုနှဈက ထှကျရှိထားခဲ့ပွီး ( ၇၈ ) နှဈ သကျတမျးရှိတဲ့ စာအုပျတဈအုပျထဲက ခတျေမီနဆေဲ ခမျြးသာဖို့နညျးလမျး ( ၁၇ ) ခု
Too Far | 14/02/2022
၁၉၃၇ ခုနှဈက ထှကျရှိထားခဲ့ပွီး ( ၇၈ ) နှဈ သကျတမျးရှိတဲ့ စာအုပျတဈအုပျထဲက ခတျေမီနဆေဲ ခမျြးသာဖို့နညျးလမျး ( ၁၇ ) ခု ၁၉၃၇ ခုနှဈက ရောငျးအားအကောငျးဆုံး စာအုပျတဈအုပျဖွဈတဲ့ Think and Grow Rich ထဲက ခမျြးသာဖို့ သော့ခကျြကို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။ အဲဒိစာအုပျထဲမှာ
အမျိုးသားညီညွတ်ရေး NUG က ကျင်းပသည့် ၇၅ နှစ်မြောက်ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း တွင် KIA စစ်ဦးစီးချုပ်က မိန့်ခွန်းပြော ( မအလ ပွဲကို အေအေ ရဲ့အကို တက်နေချိန်မှာ NUG ပွဲကို ဘယ်သူတွေတက်နေသလဲ…)
Too Far | 12/02/2022
အမျိုးသားညီညွတ်ရေး NUG က ကျင်းပသည့် ၇၅ နှစ်မြောက်ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း တွင် KIA စစ်ဦးစီးချုပ်က မိန့်ခွန်းပြော ( မအလ ပွဲကို အေအေ ရဲ့အကို တက်နေချိန်မှာ NUG ပွဲကို ဘယ်သူတွေတက်နေသလဲ…) အမျိုးသားညီညွတ်ရေး NUG က ကျင်းပသည့် ၇၅ နှစ်မြောက်ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း အခမ်းအနား တိုင်း ရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များကိုယ်စား
နွေရာသီ ပျောက်မည်ဟူသော ကောလဟာလ ဂျင်း နှင့် မြန်မာပြည်.( ဒီတပါတ်အတွင်း နာမည်ကြီးနေတဲ့ ၂၀၂၂ ခုနှစ် မြန်မာပြည်မှာ နွေရာသီပျောက်မယ်ဆိုတဲ့ဂျင်း ) .
Too Far | 09/02/2022
နွေရာသီ ပျောက်မည်ဟူသော ကောလဟာလ ဂျင်း နှင့် မြန်မာပြည်.( ဒီတပါတ်အတွင်း နာမည်ကြီးနေတဲ့ ၂၀၂၂ ခုနှစ် မြန်မာပြည်မှာ နွေရာသီပျောက်မယ်ဆိုတဲ့ဂျင်း ) . ယခုရက်ပိုင်း မည်သူစလိုက်သည် မသိသော ၂၀၂၂ ခုနှစ် မြန်မာပြည်တွင် နွေရာသီပျောက်ဆုံးမည်ဟူသော ကောလဟာလသည် ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ပေါ်ထွက်လျက်ရှိပါသည်။ တကယ်တော့ အီကွေတာရပ်ဝန်းဒေသမှာရှိတဲ့ မြန်မာပြည်မှာ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကြောင့် ပျောက်ခြင်းပျောက်